H-beam shot blasting muchina, ndewemuchina wemhando yekupfura kuputika, unonyanya kushandiswa mukuvaka nemamwe maindasitiri.Inoshandiswa kubvisa kushushikana uye pamusoro derusting kucheneswa kwesimbi zvimiro nehukuru hwesimbi saizi uye H simbi.
Q69 Steel Structure Shot Blasting Machine yePlate Cleaning
Tinogona kugadzira uye kugadzira saizi yakasiyana yesimbi plate pretreatment line zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.Ndokumbira utumire ruzivo rwako kune yedu email.
Iri rudzi rwesimbi ndiro auto blasting uye coating muchina wakagadzirwa uye unogadzirwa nekutora zvakanakira zvigadzirwa zvakafanana kubva mukati menyika nekune dzimwe nyika.Chikamu chekuchenesa chinopisa (pfuti inoputika kuchenesa) inotora vhiri remhepo rinoputika uye yakazara shutter type shot jecha separator.Muchina wekutsvaira unotora yakanyatsogadzirwa yakakwirira-yakasimba naironi rolling bhurashi uye yakakwira-kumanikidza mhepo.Iyo preheating uye kuomesa chikamu chinogona kutora nzira dzakasiyana dzekudziya.Iyo pendi yekupfapfaidza chikamu inotora yakakwirira-kudzvanywa isina airless yekupfapfaidza nzira.Iyo yakazara seti yemidziyo inodzorwa nePLC, uye ndiyo hombe-saizi yakakwana yemidziyo yepasirese yepamusoro.
Iyi pfuti inoputika muchina uye mutsara wekupenda unonyanya kushandiswa pakurapa kwepamusoro (kureva preheating, kubvisa ngura, kupfapfaidza pendi uye kuomeswa) kwendiro yesimbi uye zvikamu zvakasiyana-siyana zvemaumbirwo, pamwe chete nekuchenesa nekusimbiswa kwezvikamu zvesimbi.
Muchina uyu unoshandiswa zvakanyanya muShipweyard, indasitiri yekuvaka ngarava, indasitiri yemuchina, nezvimwe.
Models uye kutsanangurwa kwesimbi ndiro inoputika pendi yekuomesa tambo:
Ndeipi Service Antai inogona kupa?
1. Mainjiniya edu anogona kushanda zvakasiyana maererano nezvinodiwa zvekugadzirwa kwevatengi vemidziyo.uye tumira chisimbiso chemutengi kubatsira vatengi kuchengetedza mari.
2. Panguva yekugadzirwa kwemidziyo, tinofotokodzera kufambira mberi kwekugadzirwa kwechigadzirwa, uye tinotumira kumutengi kuti aone kufambira mberi.
3. Mvere dzenhumbi dzinoenda, tichazotumira zvinyorwa zvepakutanga zvemutengi (zvakadai serongedzero yekutakura, bhiri, CO, Form E, Form A, Form F, Form M, B/L etc.)
4. Tinogona kupa vatengi mahara echiRungu nheyo yekudhirowa, kudhirowa kwekudhirowa, zvinyorwa, zvinyorwa zvekugadzirisa uye zvikamu zvekudhirowa.
5. Tinogona kutumira mainjiniya edu kumisikidza nekugadzirisa mhiri kwemakungwa, uye mahara kudzidziswa kwevashandisi nevashandi vekugadzirisa.
6. Isu tine seti yeAfter-sales service system, ID ichatumirwa kune mumwe nemumwe mutengi, vanogona kupinda mune ino system inoona ruzivo rwese kutenga michina uye zvikamu nayo.Isu tinopa 24-awa online kubvunza.
1. Unoda mazuva mangani kuti ugadzire muchina uyu?
Uyu wakanyatsogadzirwa muchina zvinoenderana nezvaunoda chaizvo.Kubva pakugadzira mainjiniya kusvika pakupedzwa kwekugadzira, Inoda mazuva makumi mana nemashanu kusvika makumi mashanu.
2. Chii chinoita fekitari yako maererano nekutonga kwemhando?
Isu tinobhadhara zvakanyanya kukosha kukudzora kwemhando kubva pakutanga chaiko kusvika kumagumo ekugadzirwa.Wese muchina uchaunganidzwa zvizere uye nekunyatso kuyedzwa usati watumirwa.
3. Chii muchina wako kunaka vimbiso?
Hunhu garandi yenguva igore rimwe, isu tinosarudza nyika ine mukurumbira mhando zvinhu kuti tichengete muchina wedu uri mukushanda kwakanaka.
4. Unokwanisa here kupa kuiswa uye kutumira mhiri kwemakungwa?Zvichatora nguva yakareba sei?
Ehe, isu tinopa sevhisi mhiri kwemakungwa, asi mutengi anofanirwa kubhadhara kune mainjiniya matikiti endege uye chikafu chehotera.
Muchina mudiki kazhinji unotora mukati memazuva mashanu.
Muchina mukuru kazhinji unotora mazuva makumi maviri.
5. Ndingavimba sei kuti uendese muchina wakakodzera sezvandakaraira?
Tichanyatso endesa yakanaka mhando muchina sezvatakakurukura uye nekusimbisa muhurongwa.Nheyo yetsika yekambani yedu innovation, mhando, kuvimbika uye kushanda nesimba.Antai ndiye ALIBABA'S Goridhe mutengesi ane BV & TUV ongororo.Unogona kutarisa neALIBABA, isu hatina kumbova nekunyunyuta kubva kune vatengi vedu.
KANA UCHIFARA, PLS ONA PEJI YEDU YEKUMBA KAMPANI.
Nha.9 Huanghai West Road, Dunhu reDafeng,
Ruwa rweJiangsu, China
Zvakapfuura: High Quality Standard Shot Blasting Turbines
Zvinotevera: Cabinet Common Pressure Sand Blasting Machine
Q69 Kuburikidza Type Shot Blasting Machine YeAlum...
Kuburikidza ne Type Shot Blasting Machine ye Strenthe...
Q69 Series Steel Plate uye Profile Chikamu Stee...
Otomatiki Ahorizontal H Beam Rust Bvisa Sh...
Roller Conveyor Type Shot Blasting Machine ye ...
Photoelectric Detection Steel Plate uye Chikamu...
Kaviri Hook Abrator, Hook Polisher Abrator, Rubber Belt Type Shot Blasting Machine, abrator, Rubber Belt Shot Blasting Machine, Kuburikidza neFeed Shot Blasting Machine, Zvese Zvigadzirwa